Sidee inuu ka soo kabsado SMS ka Memory Gudaha ee Android Devices
> Resource > Android > Sidee inuu ka soo kabsado fariimaha qoraalka ka soo Gudaha Memory on Android Devices
Si ka duwan videos iyo sawiro, fariimaha waxaa sida caadiga ah la dhigayaa xasuusta gudaha gudaha qalab Android aad, si aad iyaga ma maamuli karo sida ugu fudud u maareeyaan videos iyo sawiro. Marka aad ula kac loo tirtiray videos ama sawiro, weli waxaad isticmaali kartaa qalab kabashada ah si ay u soo ceshano ka hor ay overwritten by xog cusub. Sida fariimaha, waxaad la mid ah sameeyo karin.
Waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad in aad maskaxda ku haysaa in aadan isticmaalin qalabka Android aad qoraal fariimaha, wacaan, iwm hadal, ma abuuraan wixii xog ah ka dib markii la tirtiro fariimaha qoraalka ah. Markaas ka heli qalab kabashada SMS si dhaqso badan ay badbaadiyaan. Waxaad isku dayi kartaa Wondershare Dr.Fone for Android (Android Data Recovery) , taas oo ah Android software kabashada xogta ugu horreeya adduunka ee, kuu soo kabsado fariimaha qoraalka ah ka xasuusta gudaha ee telefoonada Android, iyo sidoo kale xiriir. Ka sokow, waxaad u isticmaali kartaa inuu ka soo kabsado video iyo sawiro ka card SD ah haddii aad leedahay sida loo baahan yahay.
Download version maxkamad free of software kabashada qoraalka Android xasuusta gudaha hoos ku qoran:
Fiiro gaar ah: Fadlan hubi qalabka Android iyo OS ee Android halkan hor inta aanad bilaabin. Ma aha in dhamaan qalabka Android hadda oo ay taageerayaan Wondershare Dr.Fone for Android, haddii aad ka rujin hore.
Gudaha fariimaha xasuusta soo kabashada ee Android
Furmo suuqa ugu weyn ee Wondershare Dr.Fone for Android muujinaysaa sida soo socota.
First of dhan, waxaad u baahan tahay si aad u hubiso qalab Android aad u xaqiijiso inuu debugging USB waxaa u suurta ama aan. Habka lagu muujiyay sida tan:
Haddii aadan awood, fadlan hadda u qotomiyey, ama barnaamijka ku tusi doonaa sida soo socota ka dib markii aad qalab aad ku xidhmaan kombiyuutarka.
Tallaabada 2. Sawirka xusuusta aad Android gudaha fariimaha qoraalka ah
Markaasay aad arki doonaa suuqa kala hoose. Guji "Start" button in aynu software SMS xasuusta Android gudaha soo kabashada falanqeeyaan xogta ku saabsan qalab aad.
Inta lagu guda jiro geeddi-socodka, amar ka Request Superuser arbushin doonaa shaashadda telefoonka Android ee. Riix ah "U ogolow" badhanka si ha u dhaqaaqo, ka dibna dib ugu Wondershare Dr.Fone for Android oo guji "bilow" si aynu barnaamijka ku dhameysan sawirka.
Tallaabada 3. Kulanka Xiisaha Leh ceshan fariimaha qoraalka ah ka xasuusta gudaha on your Android
Skaanka wakhti yar dheer ku qaadan doonaa. Dabadiisna, barnaamijka ay abuuri doonaan natiijo baaritaan aad u. Halkan waxa aad ku eegaan akhrisan karaan content buuxda ee fariimaha aad, oo ay ku jiraan kuwa dhawaan la tirtiray iyo hadda jira ee kuwa (Haddii aad rabto in aad u kala sooci, waxaad isticmaali kartaa badhanka dusheeda:. Bandhigaan waxyaabaha tirtiray oo keliya). Ka dib markii xiisaha badan, aad u fiirso karaan kuwa aad rabto oo guji "Ladnaansho" iyaga badbaadiya on your computer.
Download version maxkamad free of xasuusta gudaha software ka soo kabashada fariimaha Android hoose si aad u leeyihiin isku day ah:
Fiiro gaar ah: Fadlan hubi qalabka Android oo halkan OS ee Android ka hor inta aadan u qabtaan soo kabashada. Ma aha in dhamaan qalabka Android hadda oo ay taageerayaan Wondershare Dr.Fone for Android, haddii aad ka rujin hore.